Imibala ephakamileyo yemfundo yimibala ephakathi eyenziwa ngokuxuba ukulingana okulinganayo kombala oyintloko kunye nombala wesibini obusondeleyo kwisevili lombala.
Kukho imibala emithathu ephambili - obomvu, ophuzi, kunye nohlaza; imibala emithathu yesibini (eyenziwe ngokuxuba ezimbini izibini ezihlangeneyo kwiindawo ezilinganayo) - eluhlaza, oluhlaza kunye nobomvu; kunye nemibala ephakamileyo emithandathu - obomvu-oluhlaza, ophuzi-olunebhanki, obomvu-obomvu, obomvu-obomvu, obomvu-obuluhlaza kunye nobuluhlaza obuluhlaza.
Kuyinto yendabuko ukubiza umbala ophezulu emva kombala oyintloko kunye nombala wesibini ozayo, ohlukaniswe ngophawu.
Imibala ephakamileyo yamanqanaba amanyathelo phakathi kwemibala ephambili kunye neyesibili kwivili elingu-12 lombala. Ivili lemibala engama-12 linemibala ephambili, yesibini kunye nemigangatho ephezulu njengomfanekiso obonisiweyo, kunye no # 1 obonisa imibala ephambili, # 2 emele imibala yesibini, kunye # # emele imibala ephakamileyo. Ivili lemibala engama-6 liqukethe imibala ephambili kunye neyesibili, kunye nevili lesithathu lemibala elinesibini elinemibala ephambili.
"Ngokulungelelanisa ubukhulu bemibala ephambili kunye neyesibili, unokwenza uluhlu olubanzi lwemibala ecashileyo. Eminye imibala ephakathi ingenziwa ngokudibanisa ngokuphindaphindiweyo isibini ngasinye esingummelwane kude kube yinto eqhubekayo yokuguqula umbala. "(1)
Ukusebenzisa i-Tertiaries kukunceda udibanise imibala
Ivili lokuqala lombala ladalwa nguSirk Isaac Newton ngo-1704 emva kokufumanisa ukubonakala kwelanga elimhlophe xa lidlula kwi-prism.
Ukubona ukulandelelana okubomvu, i-orange, i-yellow, eluhlaza, eluhlaza okwesibhakabhaka, ye-indigo, kunye ne-violet (eyaziwa njengegama eliqhelekileyo elithi ROY-G-BIV), iNewton yabonisa ukuba obomvu, obomvu, kunye nohlaza kwakuyimilayezo evela kuyo yonke imibala kwaye wadala isondo lombala kule ndawo, ukuguqula ukulandelana kwemibala ngokwakho ukwenza isangqa kwaye ubonise ukuqhubela phambili kwembala.
Ngowe-1876 uLouis Prang wayesebenzisa i-wheelory theory, ekwakheni isondo lombala esiluqhelanise nanamhlanje, inguqu ebhaliweyo ye-hues ecocekileyo yembonakalo (akukho tints, iitoni okanye i-shades ), ukuchaza imfundiso yombhalo kwaye ube isixhobo soogcisa ukuqonda indlela yokuxuba imibala kunye nokudala imibala abayifunayo.
Kwaqondwa ukuba imibala ibhekisana nomnye ngezindlela ezimbini ezahlukeneyo: bahluke okanye bahambelane. Ivili lemibala lisinceda sibone indlela imibala ehambelana ngayo ngezikhundla zabo kwisiganeko sombala omnye komnye. Le mibala esondelene ngokubanzi iyahambelana kwaye ihambelana kangcono, ivelisa imibala enamandla xa ixutywe kunye, ngelixa iindawo ezahlukileyo ziyahluke ngakumbi, zivelisa imibala engaphelelanga okanye imibala edibeneyo xa ihlanganiswe.
Imibala ejikeleze omnye nomnye kuthiwa imibala engafaniyo kwaye ihambelane. Ezi ziphikisanayo zibizwa ngokuthi imibala ehambelanayo . Le mibala xa ixutywe kunye ibangela umxube obomvu, kwaye omnye umxhasi angasetyenziselwa ukuncedisa okanye ukukhupha omnye.
Ngokomzekelo, ukudala umbala ophezulu kunye nohlobo oluphuzi unokudibanisa kunye nombala wesibini phakathi kwebala elibomvu nelomvu, olulunxwemeni, ukuba lube luphuzi-olune-orange okanye nombala wesibini phakathi kohlaza okwesibhakabhaka kunye noluluhlaza, oluhlaza, luhlaza.
Ukukhupha i-yellow-orange uyingxube kunye neyohlukileyo, i-blue-purple. Ukutshintsha i-yellow-green udibanise kunye naso ngokubhekiselele, obomvu obomvu.
Ukuba uzama ukudibanisa uhlaza obuninzi ungasebenzisa uphuzi ophuzileyo, njengotshani obomvu hansa kunye nolubhakabhaka olufudumele olunjenge-cerulean eluhlaza okwesibhakabhaka ngenxa yokuba sisondelelene kunye nevili lesiganeko. Ngeke ufune ukusebenzisa umbala ophuzi-olomnatha, njengezo-yellow-orange azo kunye ne-ultramarine eluhlaza okwesibhakabhaka ngenxa yokuba isahlukanise ngakumbi kwivili lesiganeko. Le mibala inemibala ebomvu ixutywe kunye nabo, ngokudibanisa yonke imibala emithathu ephambili kumxube omnye, okwenza umbala wokugqibela ube luhlaza obunobuninzi obunobuninzi obunobuninzi obunobuninzi obunobuninzi obunobumba obuhlaza.
Funda Umbala weMbobo kunye nokudibanisa imibala ukuze ufumene indlela yokudweba isondo lakho lombala usebenzisa iindawo ezipholileyo kunye nezifudumele zombala ngamnye oyintloko ukudala uluhlu olubanzi lwemibala yesibili.
Khumbula ukuba imfutshane yokuba imibala eyahlukileyo ihamba ngevili lesiganeko, ehambelana nayo, kwaye umbala ogqithiseleyo uza kuba xa imibala idibaniswe.
Inkcazo yemfundo ephakamileyo emiselwe kwi-Triangle yeGoethe (engaphantsi isetyenziswe)
Ngowe-1810, uJohn Wolfgang Goethe wayinomngcipheko kwiingcinga zikaNewton ngokuphathelele umbala nombala kunye nokupapasha zakhe iingcamango kuMbala ngokusekelwe kwimiphumo yengqondo. Kwinqanaba leGoethe le zintathu zokuqala - obomvu, obomvu, kunye nohlaza okwesibhakabhaka - zikwinqanaba lexantathu kwaye imibala yesibini iphakathi kwemida yexantathu. Yintoni eyahlukileyo kukuba i-tertiari yimizila engxenyeni engadlulanga imibala eyenziwe ngokudibanisa umbala oyintloko kunye nombala wesibini ochasene nayo kunokuba ungasondelene nayo. Ngenxa yokuba oku kudibanisa yonke imibala ephambili, umphumo uyintlukwano ebomvu, kwaye ihluke kakhulu kunenkcazo esetyenziswa ngokuqhelekileyo kumbala wezemfundo ephezulu, eyona nto ibalulekileyo kubadwebi. Kunoko, i-Goti's tertiaries yintoni abaphandi abaqhelekileyo abaziwayo njengemibala engathathi hlangothi .
> 1. UJennings, uSimon, Umqulu Opheleleyo weMculi, Isikhokelo esicacisiweyo sokuDrafra nePainting , iphe. 214, Chronicle Books, eSan Francisco, ngo-2014.
Iingcebiso ezili-10 eziPhambili zoPeyinti lweFurus Black
I-Self Portrait: I-Demo-by-Step-Demo
Indlela yokuSebenzisa iziHlomelo zeziHlomelo ukuBonisa ukuPhatheka
Imfazwe yaseSpain-Amerika: iMfazwe yeSan Juan Hill
Ingqwalaselo yeeRhafu zokuTshintshisiswa kweNkcitho
Yintoni Ebangelwa I-Hydrogen Bonding?
Ukukhetha iNkqubo yeeNgqungquthela eziPhambili zezoQoqosho
Craps 3-4-5 Times Iingxaki
Du'a: Imithandazo yamaSulumane yokuPhilisa
Iyintoni iMiphumo yeBhubhe?
Iintlobo ze-Acoric acid reaction reaction